जोन ब्लूको लेख खुला छ Martech Zone |
द्वारा लेखहरू जोन निलो
शनिबार, जून १,, २०१। शनिबार, जून १,, २०१। जोन निलो
मैले हालसालै Drupal के हो भनेर सोधें Drupal परिचय गर्न को एक तरीका को रूप मा। अर्को प्रश्न जुन दिमागमा आउँदछ त्यो हो "के मैले ड्रुपल प्रयोग गर्नु पर्छ?" यो ठूलो प्रश्न हो। धेरै चोटि तपाइँ एक टेक्नोलोजी देख्नुहुन्छ र यसको बारेमा केहि तपाइँले यसको प्रयोगको बारेमा सोच्न प्रेरित गर्दछ। Drupal को मामला मा तपाईले सुन्नु भएको छ कि केहि राम्रो मुख्यधारा वेबसाईटहरु यस खुला स्रोत सामग्री प्रबंधन प्रणाली मा चलिरहेको छ: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec जडान, र नयाँ
के तपाई ड्रुपललाई हेर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंले Drupal को बारेमा सुन्नुभयो तर निश्चित हुनुहुन्न कि यसले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ? के Drupal आइकन यती राम्रो छ कि तपाईं यो आन्दोलनको एक हिस्सा बन्न चाहानुहुन्छ? Drupal एक खुला स्रोत सामग्री प्रबंधन प्लेटफर्म हो जसले लाखौं वेबसाइट र अनुप्रयोगहरूलाई चलाउँछ। यो निर्माण, प्रयोग, र विश्वभरका एक सक्रिय र विविध समुदायका समर्थन गर्दछ। म अधिक जान्न सुरू गर्न यी संसाधनहरूको सिफारिश गर्दछु
WordPress.com? यहाँ किन म पहिले यो प्रयोग गर्छु।
बुधबार, मार्च 13, 2013 बिहीबार, मार्च ० 14, २०२० जोन निलो
WordPress एक प्रमुख ब्लगिंग प्लेटफर्म उपलब्ध छ र दुई रूपहरुमा आउँछ, WordPress.com र WordPress.org। पहिलो फारम, WordPress.com एक व्यावसायिक सेवा हो जुन वेबमा नि: शुल्क र सशुल्क ब्लगि tools उपकरणहरू प्रदान गर्दछ (वर्डप्रेसको पाठ्यक्रम प्रयोग गरेर)। WordPress.com ले सफ्टवेयरलाई सेवा मोडलको रूपमा प्रयोग गर्दछ (उर्फ एसएएस), ब्लगि software सफ्टवेयर उपकरणहरू मर्मत गर्दै र सुरक्षा र सामग्री डेलिभरी (ब्यान्डविथ, भण्डारण, आदि) जस्ता चीजहरूको ख्याल राख्दै। दोस्रो फारम, WordPress.org, समुदाय हो जसले सहयोग गर्दछ
वर्डप्रेस, ड्रुपल, जुमला जस्ता सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएस) ले कति खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) मा भाग लिन्छ? निश्चित रूपले खराब साइट डिजाइन (सफा युआरएलहरू, नराम्रो सामग्रीहरू, प्रयोगक्षेत्र नामहरूको नराम्रो प्रयोगहरू, इत्यादि) ड्रुपल जस्ता सीईएमएसमा एसईओ (खराब उपकरण बिचारमा प्रयोग हुने उत्कृष्ट उपकरणहरू) लाई असर गरिरहेको छ। तर के सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली आफैंमा अरू भन्दा राम्रो SEO लाई उधारो दिन्छन्, यदि अन्य सबै राम्रो अभ्यासहरू गरियो भने? र, कसरी हुनेछ